Osenyameni White ezingabantu: Izimbangela Nezingozi Ukwelashwa
Lapho ukwehlukana amadoda - kungakhathaliseki ukuba ngokuthi? Ngezinye izikhathi kuba abesifazane, ngokunembile, nabamhlophe. Kodwa nakhu ambalwa ukwazi ukuthi ukubukeka izinhlobo ezahlukene sokukhishwa futhi isici besilisa. Njengomthetho, abameleli bayo bamshaya indiva kakhulu, kodwa uma nje abamhlophe ungaqali ukuba ungakhululekile. Lokhu kwenzeka lapho urethra ezingabantu uqala secrete uketshezi noma isikhwehlela. Ngokuvamile lokhu yinto evamile, kodwa kwezinye izimo zingase zibe Indlela isifo.
Bheka Ukukhetha obuningi lula kakhulu. Ngokuvamile zibonakala ngemuva kokulala noma ngemva ukuchama. Uma ocucuzayo emhlophe e amadoda zibonakala ngesikhathi injabulo enobudlova, kusho ukuthi impilo ayenakho konke ukuze. Ukukhathazeka kuyadingeka uma akusiyo ngesikhathi ocansini. Uma lokhu uphawu livela njalo, cishe, kukhona ukuvuvukala. Futhi Kwabiwa mhlophe amadoda kungaba uphawu lesi sifo, okuyinto ezithathelwana ngobulili, isib, i-chlamydia.
Ngezinye izikhathi kuyenzeka ukuthi indoda itheleleke nge thrush. Lena Nokho, into ezingavamile kakhulu, izimo ezinjalo zenzeka practice. Izimpawu zesifo ezingabantu asemhlophe, khulula izaqheqhe kusukela urethra. Lokhu kungase kubangelwe ukuthi amasosha omzimba aphansi, imithi elwa namagciwane, amakhemikhali noma amagciwane umlingani wakhe. osenyameni White ezingabantu kungenzeka kubangelwa izifo ezifana urethritis. Phakathi ukuvuvukala lwamafinyila urethra iqala ukukhiqiza amangqamuzana abomvu egazi, isikhwehlela mhlophe futhi uketshezi ukuthi buthelela ezizindeni ukuvuvukala. Esinye isizathu ukuthi guys kwenzeke leucorrhea lilimele amakhemikhali urethra ezifana usawoti zinhlayiya. Uma kukhona osenyameni emhlophe kusukela urethra ezingabantu, okuyinto ahambisana zivutha ukulunywa, kungaba uphawu chlamydia, mycoplasma, ureaplasmosis. Lezi isifo kudinga ukunakekelwa ngezokwelashwa. Ukwabiwa nge foamy ukungaguquguquki kusho ukuthi amadoda sifo ezivamile - trichomoniasis. Kodwa lesi sifo esiyingozi kakhulu futhi singathandeki kubantu besilisa prostatitis. Izimpawu avele osenyameni njengoba ezimhlophe, kukhona ubunzima ukuchama, izinkinga ziqala impilo obuseduze. Ngokusekelwe osekushiwo, singaphetha ngokuthi konke okukhethile eziletha ukungakhululeki - lokhu kuwumphumela i ukuvuvukala. Ngakho-ke, umzimba abonise Ukuvikelwa noma ekuphenduleni ukutheleleka. Ngobuningi sokukhishwa anjalo amadoda ukhuluma ngani ngesilinganiso yesifo yingozi.
Kuzo zonke izimo, kufanele uxhumane nodokotela wakho ngokushesha. Ukwabiwa yiluphi uhlobo Uyi isizathu sokukhathazeka. Kuyadingeka ngesikhatsi ukwelashwa agweme noma iziphi nobuhlobo bobulili. Uma kungenjalo, khona-ke okungenani sebenzisa ikhondomu. Kunoma ikuphi akunakwenzeka ukuba aphathe ekhaya wedwa. Phela, lokhu kungase kuholele ekubeni ukudluliswa amagciwane engxenyeni anterior we urethra ngaphambili langemuva, okungukuthi, phakathi endlaleni engasesinyeni noma emasendeni. Kodwa umphumela sina kakhulu kungaba ubuthakathaka noma kulungiswe inkinga yokungabi nenzalo.
Kuthiwani uma umfana ugcina ngokushesha?
Ngengozi varicocele ezingabantu?
Indlela ukugqoka ikhondomu.
Ukwelashwa ngemisebe umdlavuza wendlala yabesilisa: nomthelela futhi ukusebenza
Yini isidoda? Izinkomba of Assay futhi emagama spermogrammy
Has a talent esiyingqayizivele UNikolai Feshin: ubuhlakani engaziwa yokudweba
Dzheymi Karrager: nokuphila kwangasese nezithombe
Kuyini kumhambela: definition, izimbangela, nemiphumela
Izivakashi Sim-amakhadi njengoba elinye ithuba Iyazulazula
Ukhonkolo block: izinhlobo kanye nezici
Ukuqagela othandweni: "uthanda - ongamthandi, ukuba kiss inhliziyo - ukuthumela esihogweni"
Imiqulu emihle yenhlanzi ebomvu: ukugcwaliswa, izindlela zokugqoka, umhlobiso
Yiziphi irrigators? Ephathekayo Waterpik irrigators